Xaaladda Mukhtar Roobow oo laga deyrinayo | KEYDMEDIA ONLINE
Xaaladda Mukhtar Roobow oo laga deyrinayo
Roobow ayaa isku soo dhiibay dowladda bishii August 2017, waxaana lagu xiray Baydhabo December 2018 waxyar kahor doorashadii Madaxtinimada Koonfur Galbeed.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xaalad caafimaad darro ayaa soo wajahday Mukhtaar Roobow, kadib markii uu cuntada ka soomay saddex maalin kahor isagoo ku xiran xabsi qarsoodi ah oo ku yaalla Muqdisho.
Mid kamid ah xubnaha katirsan qoyska Roobow ayaa sheegay in hogaamiyaha uu diiday inuu cuntada cuno khamiistii lasoo dhaafay, iyadoo arintaas uu keentay inuu jirkiisa daciifo, islamarkaana ay kusoo xoogeysteen xanuuno horey u hayay.
Wuxuu ku jiraa guri ku dhaw xarunta NISA, ee Habar-Khadiija, waxaana ilaaliya Ciidamo gaar ah, oo Fahad Yaasiin u xil-saarey, isagoo Roobow loo diiday inay qoyskiisa iyo Caruurtiisa soo booqdaan ama uu Taleefoon kula hadlo.
Roobow oo dowladda ay cafisay, una dirtay markii uu isku soo dhiibay Sacuudiga oo kusoo cumreystay, ayaa lagu xiray Baydhabo Dec 2018 isagoo u tartamayay xilka Madaxweynaha Koonfur Galbeed.
Xarigiisa waxaa loogu qiil-dayay inuu wali ku jiro Liiska Interpole, booliska aduunka oo kiisas lagu haysto, waxaana la dhigay xabsiga oo saddex sano ku jiro isagoo aan wax Maxkamad ah lasoo taagin, ama dembi lagu soo oogin.
Xasan Sheekh, Madaxweynihii hore ee Soomaaliya ayaa xariga Roobow ku tilmaamay afduub, isagoo xusay in sida loola dhaqmay hogaamiyan ay sabab u noqonayso xubno kasoo goosan rabay Al-Shabaab inay saaxadda dagaalka kasoo bixin.
Farmaajo ayaa la sheegay in dano siyaasadeed uu ka lahaa xariga Roobow, maadaama uu khatar ku ahaa Lafta Gareen oo loo wadey Koonfur Galbeed, isagoo xiligaasi aan taageero badan ka haysan Digil iyo Mirifle.